5 Meelaha Quirkiest & Coolest Hotels Hotels ee Paris
The 5 Quirkiest (iyo Coolest) Boutique Hotels ee Paris
Naqshadeynta Naqshad leh Fikrado aan caadi aheyn oo xiiso leh
Haddii aad raadineyso wax yar oo ka mid ah caadiga ah ee hoteelka Paris, waxaad ku jirtaa nasiib wacan: fikradda boutique-ka ee hotelka ayaa soo jiidatay xayiraad sannadihii la soo dhaafay, sida warshadaha hudheelka ah waxay ku tartamayaan adeegyada kirada guryaha ee dareenka iyo Euros. Halkii ay ku bixin lahaayeen kaliya raaxo iyo raaxo , hudheeladan waxaa lagu dhisay mowduucyo aan caadi ahayn oo cajiib ah - laga soo qaado sawirada, taariikhda, barafka iyo barafka - taas oo ku dhawyahay ballanqaad si ay u noqoto meel aan caadi ahayn, iyo waayo-aragnimo. Lagu siinayo inaadan ka fikirin xerada yar iyo kitsch halkan iyo halkaas, oo ku raaxeeyso qurxinta mawduucyada loo qaato xayiraadaha xayeysiiska ah, haajiraad mid ka mid ah kuwan 5 dukumiintiyada casriga ah ee Paris ku yaala waxay kaa caawin doonaan inaad isku dardariso midab yar iyo mid fantastik ah safarka soo socda ee caasimada Faransiiska.
Diido Paris Seine
XIDIGA Paris Seine waa hudheel biyo leh oo ku yaalla dhinaca bidix ee webiga Seine. Wareegtada OFF-ka ee Paris Paris Seine
Maaddaama webiga Seine uu yahay wadnaha taariikhiga ah iyo nafta ee Paris, maxaa noqon kara qaboojiye, iyo deegaan ahaanba ku haboon, intii aan joogin hudheel, taas oo macnaheedu yahay biyaha webiga caanka ah? Hotelka kaliya ee noociisa ah ee caasimadda, OFF ayaa ku xiran xaq u dhow xarunta tareenka ee Gare d'Austerlitz oo u dhexeeya bangiga midig iyo bidix ee magaalada. Iyada oo ay quruxbadan tahay, naqshad casri ah, hudheelka ayaa ku jira 54 qol, oo ay ku jiraan afar suxuun leh, barkad jilicsan iyo marina - ku habboon boodhadhka biyaha. Dhammaan qolalka - kuwaas oo loo qaybiyo maraakiibta hoose ee sare iyo sare - waxay bixiyaan aragtiyada Seine, laga bilaabo xaglo kala duwan iyo farriimo kala duwan oo ka baxsan dhismayaasha Paris, oo ay ku jiraan Notre Dame Cathedral. Waddada gaarka ah ee gudaha ayaa waxaa loogu talagalay dhismaha caanka ah Gérard Ronzatti.
Barkadda cocktail, oo ku jirta naqshad qurux badan oo aan fiicnayn, waxay u adeegtaa cabitaannada, lafaha, jiiska iyo joodariyeyaasha caashaqa habeenkii; waxaad ku raaxeysan kartaa quraacda, waxaadna ku qurxin kartaa inta lagu jiro maalinta, inta aad ku raaxeysaneyso muuqaalka.
Qolka Musee d'Orsay ee Hotel Design Secret de Paris wuxuu soo jiitaa quruxda saacadda Orsay. Naqshadeynta Hotel Design Secret de Paris
Ma Paris waa mid ka mid ah sirtaada - mise ma qarsoodi - qarsoodi? Ma jeceshahay derbiyada kala-soocida guriga dhexdiisa iyo ka shaqeynta sawirada muusikada caanka ah ee magaalada, ama riyaaqa akhrinta dhammaan wixii ku saabsan horumarintiisa qarniyo badan? Hadday sidaas tahay, hudheelkan afar jirka ah ee naqshaddan ku yaala ee ku yaala aag kalsoonaan ah oo ka mid ah 9-ta arrin ee meel u dhow Xarunta De Clichy waa doorasho aad u fiican. Dhamaan xarumaha caasimadda Faransiiska, mid kasta oo ka mid ah lix qol oo raaxo leh oo u dhigma qaar ka mid ah dhismooyinka ugu caansan magaalada iyo waqtiyada taariikhiga ah, xoojinta halkan waxay ku jirtaa raaxaysiga iyo tayada oo ay ka soo baxday naqshad iyo naqshad. Milkiilayaashu waxay soo jiidanayeen foojignaan adag: abuurista fikrado ah oo soo jiidasho leh oo ku marti qaadaya halkii ay ka muuqan lahaayeen kitschy.
Laba ka mid ah qolalka ugu qaalisan, Musee d'Orsay iyo Trocadero, ayaa leh muuqaal jacuzzi ah oo leh xakamayn nalalka dabiiciga ah, oo loogu talagalay joogitaan dheeraad ah. Qolka Orsay-ku-mida waxay ku badan tahay habka saacadaha ay ku dhajinayaan matxafka weyn ee madow, saacad madow, oo ku saabsan wakhtigii dhismuhu u adeegay sidii saldhig tareen ah. Dhanka kale, qolka Trocadero wuxuu ka kooban yahay waxyaabo farshaxan ah iyo waxyaabo qarsoodi ah oo xasilan oo ka mid ah Palais de Chaillot.
Eiffel Tower-qolka caadiga ah, ee loogu talagalay Paris 'caanka ugu caansan , waa mid aad u raaxo badan, laakiin weli waxay bixisaa waxyaabo badan oo sare ah. Martidu waxay ku raaxeeysataa musqusha iyo jajabiyaha, nalalka kontoroolka ah ee kontoroolka ah, TV-yada weyn ee TV-ga, minibar iyo waas-banaan daboolan leh oo leh diyaarado u eg khibrad isboorti ah. Hudheelku wuxuu kaloo ku yaallaa qolka hoose iyo saqafka (qolalka).
Quraacda oo dhan waxay ku jirtaa qiimaha qolalka, waxaana lagu qabtaa qolka qurxinta quruxda badan, taas oo sidoo kale u adeegta barkad iyo makhaayad fiidkii. Shaqaaluhu waa kuwo diirran oo soo dhaweynaya, tani waa doorasho afar dabaq ah oo bixisa ikhtiyaari oo aan ku helin raaxo la'aan aan haysan ama is-dhaafsiin - isku-dhafan oo loogu talagalay magaalo sida Paris.
Hotelka Paris ee Decim waa sawir iyo sawir-qurxin asaasiga ah. Waajibaadkii Paris
Muuqaalkan laakiin waa la go'aamiyey in dabeecada madadaalo leh iyo madadaalo leh ee ku yaala xaafada Montmartre ay tahay doorasho aad u wanaagsan oo loogu talagalay qof walba oo xajiya sawirka, sawirka, ama labadaba.
Mid kasta oo ka mid ah qolka 4-ta ah ee 18ka qol ee hawada qabta ayaa soo jiidanaya booqashooyinka farsamooyinka taariikhiga ah ee sawir-qaadista, oo bixiya wax aan caadi aheyn oo joogitaanka Paris. Qolalka madow iyo caddaanku waxay ku yaalaan qarsoodi madow iyo caddaan ah, halka qolalka "Stargazer" ay ku guuleysan doonaan qof kasta oo leh xusuusta caruurta ee xusuusta xiddigaha ama qalabka telescope ee ugu horreeya: qorrax buuxa oo qoto dheer iyo madow oo madow ayaa kor u qaadaya saqafka, oo sariirta iyo daahyada oo dhammuna waa ku qosleen. Saameyntu waa caruur oo kale oo ka badan tiyaatada taakulada - laakiin sida ugu fiican.
Sagaalka naadi oo raaxo ah ayaa riixaya fikradda madadaalada xitaa dheeraad ah, waxay ku faantaa waxyaallaha tijaabada ah iyo isdhexgalka sida kamaradaha qarsoodiga ah oo qaata sawirrada qolka ka dibna dib-u-dhisa meelo kale. Haddii aadan aheyn sawir-qaadid, fikradu waa mid xiiso badan. Mawduucyada suuliga waxaa ka mid ah qolka "Selfie", oo leh laydhka saqafka dhalaalaya oo leh muuqaal qurux badan, sariir wareegsan oo ku wareegsan muraayadaha: ku haboon nafta jilicsan ama jaceylka adag.
Waxaa sidoo kale jira suugaan casri ah oo casri ah Paparazzi; suunka Polaroid, iyo suunka studio, oo lagu buuxiyo kamarad raajo ah, qalabka sawirada digital-ka ah oo muuqaal ka sameysan boorso, iyo shaashad weyn oo sawirada aad qaadato si deg deg ah loogu qiyaaso derbiyada. Qaybtan ugu dambeysa ee suurtogalka ah ayaa ah midka ugu fiican ee loogu talagalay joogitaanka reer Jasiiradda ah ee reer Paris ama malab.
Haddii aad xiiseyneysid inaad isu-gashid faylalka farsamooyinka shaqsiyadeed ama xirfad-yaqaan, waxaa jira xitaa goobta studio-ka ah ee farsamada ah.
Barkadda Ice Kube, ee Paris Hotel ee Kube. Naqshadeynta barafka barafka / Kube Hotel
Haddii aad rabto inaad ka fogaato kuleylaha xagaaga ama aad u xiiso geliso farxadda xilliga jiilaalka ah, hudheelkan hudheelka ahi waa kaararka barafka ee barafka "Ice Kube", oo leh muraayadaha, derbiyada iyo kuraasta oo dhan laga sameeyay baraf. Inkasta oo hotelka laftiisu uu si xun u dareemayo qolka barafka ah, hadana fiidkii barafka, kaliya kaliya nooca caanka ah ee caasimadda Faransiiska, waxay u samayn kartaa joogitaan taas oo ah mid aan caadi aheyn, madadaalo leh oo xiisa leh.
Nestled inta u dhaxeysa Montmartre iyo Gare du Nord - meel u dhow oo ku habboon xarun Eurostar ah - hotelka afarta afa ah waxay ka kooban tahay naqshad Scandinavian ah oo leh caddaan cad oo cagaaran, qalab aan dhicin iyo qoryo fudud. Waa mid casri ah oo aan dareemin qabow. Dadka jecel farshaxanka casriga ah ayaa qadarin doona dareenka naqshadaynta iyo sawir-qaadista laga bilaabo laba lenses-ka-soo-socda Faransiis, Janol Apin iyo Nathalie Roux.
Barafka barafka, oo la booqan karaa oo kaliya marka la keydiyo (hubi inaad si fiican u sameyso kahor intaadan joogin si aad uga fogaato niyadjab) waxay u adeegtaa noocyo kala duwan oo ah vodkas iyo cocktails oo ka timaada Graed Goose. Nalalka buluuga ah iyo fuchsia waxay ku ciyaaraan barafka, iyagoo abuuraya astaanta dabiiciga ah ee Arktic ee nalalka waqooyiga.
Quruxda quruxda badan waa hudheel cajiib leh oo cinwaan ah oo ku yaal Paris, oo leh 24 qol. Naqshadeynta Hotel Splendor.
Hudheelkan ku yaala xeryaha 17aad ee degan , mid ka mid ah degaannada aan degenayn ee Paris, ayaa u heellan taariikhda muusikada iyo filimada. Fikrado aad u fara badan iyo cilmi-baaris taxaddar leh ayaa u muuqata in ay gashay mid kasta oo ka mid ah hoteelka 24-ka ah ee la soo galo, iyada oo xoogga la saarayo baaritaanka farshaxanka farshaxanka iyo iftiinka, iyo sidoo kale awooda khiyaaliga ah. Marka lagu daro sawirada iyo iftiiminta mawduucyadaas, faahfaahin taxaddar leh - koofiyado sixir ah si ay u ciyaaraan kaararka - ka dhig mid ka mid ah qolalka waayo aragnimo xiiso leh iyo xiiso leh.
Taageerayaasha Filimadu waxay u badan tahay inay u sharaxaan qolka lagu qurxiyo filim sameeyaha filimka hore ee Faransiiska Georges Méliès, iyadoo muuqaalkeeda wayn ay ka muuqatay ninkii dayaxa ahaa ee qolka, oo uu soo diray filimka "A Trip to the Moon". Maadaama miyuusiggu la aasaasay mabda'a sixirka iyo shucuur, taasi waxay u muuqataa inay xaqiiq tahay.
Qolalka kale ee qoraalka ah ee hudheelka ku yaal waxaa ka mid ah hal cayn oo ah 12 calaamadaha jilitaanka iyo farshaxanka farshaxanka ah ee cilmiga; mid kale oo diiradda saaraya sharraxaadda iyo xajmiga sawirrada sawirrada laga soo qaado buugaagta jimicsiga ee hore, iyo mid kale oo lagu qurxiyo casaan iyo casaan cad oo ku saabsan mawduuca muusikada iyo boorsadiisa tabaha dhaqanka.
Cuntada Cuntada ee 11-ka Habeen ee Paris
Roland Garros 2018: Faransiiska Furan ee Paris
Hagaha Xarunta Farshaxanka casriga ah
Habeenka Farshaxanka Paris (Nuit des Musees): Tilmaamaha 2018
Rock en Seine: Farshaxanka ugu wanaagsan ee xagaaga ee Paris
Chic Le Touquet Paris-Plage oo ku taal waqooyiga Faransiiska
Ice Rink oo ku taala meesha PPG
Talooyin muhiim ah oo aad ku xasuusato goorta aad u socdaalayso dhul baaxadda leh ee Russia
Booqashada Biyaha Magaalada Booska Sukhou iyo Shanghai
Qaadista Makhaayadaha, Barkadaha, iyo Iskuduwaha ee England
Fasaxyada Qoyska ee Yurub
Xayawaanka xayawaanka ee Phoenix
Booqashada Hore ee Hitler Bunker ee Berlin
Ku safrida Vientiane ee Laos
Dhar u eg sida A Local
Booqashada dhismaha "Capitol State Capitol State" iyo "Grounds"
Sidee loo karsado Lobsters